सेयर बजार 'अन्डर भ्यालुड' छ, किन्ने बेला यही हो : निर्मल भट्टराई | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सेयर बजार ‘अन्डर भ्यालुड’ छ, किन्ने बेला यही हो : निर्मल भट्टराई
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मर्चेन्ट बैंकरको अनुमति लिएर लगानी व्यवस्थापकको काम गरिरहेको संस्था हो– केसीएल अस्ट्युट लिमिटेड । लगानी व्यवस्थापकको दायरामात्र नभई परिभाषा नै बदल्ने उद्देश्यसहित स्थापित यो कम्पनीले स्थापनाको छोटो अवधिमै केही कर्पोरेट हाउस, विभिन्न पेसामा आबद्ध व्यक्ति, बैंकर र सर्वसाधारणको करोडौं लगानी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । घट्दो बजारबाट पनि नाफा कमाउनसक्ने क्षमता राख्ने गरी स्थापित यो कम्पनीको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्– निर्मल भट्टराई । केसीएल स्थापनाको उद्देश्य, टिमको स्ट्रेन्थ र प्रतिफल सुनिश्चितताका आधारलगायत विषयमा केन्द्रित रही भट्टराईसँग गरेको कुराकानी :
केसीएल अस्ट्युट स्थापनाको खास उद्देश्य के हो ?
नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी करिब पाँच हजारजति छन् । हामी पनि पहिला इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीकै रुपमा स्थापित भएका हौं । त्यसपछि विस्तारै हामी लगानी व्यवस्थापकका रुपमा धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त संस्था बन्यौं । अहिले लगानी व्यवस्थापकको रुपमा स्थापित संस्था भने २६ वटा मात्र छन् । मर्चेन्ट बैंकर भएर गर्न पाउने ५–६ वटा कार्य छन् । त्यसमध्येको एउटा काममा मात्र हामी केन्द्रित छौं, त्यो हो– पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट । लगानी व्यवस्थापनतर्फ इन्डस्ट्री नै चेन्ज गर्ने गरी अघि बढ्ने हाम्रो योजना छ । यसमा पूर्ण रुपमा सफल नभएसम्म हामीले अधिकार पाएका अन्य काममा हामी हात हाल्दैनौं । हामीले २०७५ असार २० गते लाइसेन्स लिएका हौं । सेयर बजारमा आफ्नै गतिमा उतारचढाव आइरहन्छ । तर, मानिसको मनोभाव कस्तो हुन्छ भने जब बजार बढ्छ, कमाइने रहेछ भनेर प्रवेश गर्ने, जब बजार घट्छ, गुमाइने रहेछ भने भाग्ने । यसको अर्थ, हाम्रो मार्केटमा अधिकांश लगानीकर्ताहरु हल्लाको भरमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । अर्थात्, लगानी गर्नुअघि प्रतिफलको सम्भवनाबारे अध्ययन गरेको पाइँदैन । तर, सेयर किन्दा त्यस कम्पनीको खास भ्यालु कति हो ? प्रतिफलको सम्भवना कति छ ? मैले कहिलेसम्म राख्ने ? या कति बढेपछि बेच्ने ? जस्ता कुराको जानकारी अनिवार्य छ । तपाईंसँग पैसा छ र लगानीका लागि वैकल्पिक क्षेत्र खोजिरहनुभएको तर समय छैन या त समय भएर पनि लगानी कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ भने हामी तपाईंको लगानी व्यवस्थापन गरिदिन्छौं ।
पोर्टफोलियो व्यवस्थापनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त संस्था २६ वटा छन् । लगानी गर्न चाहने व्यक्ति यहीँ चाहिँ किन आउने ? यहाँहरुले दिने खास र फरक सेवा के–के हुन् ?
मैले अघि पनि भने धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका हामीजस्ता संस्थाहरुले गर्न सक्ने काम ५–६ वटा छन् तर अन्य संस्था लगानी व्यवस्थापनभन्दा अरु काममा बढी फोकस छन् । यो क्षेत्र उनीहरुको प्राथमिकतामा छैन । उनीहरु म्युचुअल फन्डमा केन्द्रित छन् । तर, हाम्रो पूरा टिम नै यही सेक्टरमा फोकस भएकाले हामी अरुले भन्दा बढी रिटर्न दिन सक्छौं । हामी यो सेक्टरलाई नै पुनः परिभाषित गरेर जान चाहन्छौं । त्यसका लागि हामी तपाईंको रिस्क लिनसक्ने क्षमतासमेतको विश्लेषण गरेर लगानी व्यवस्थापन गरिदिन्छौं ।
कस्ता–कस्ता व्यक्ति र संस्था तपाईंकहाँ आउन सक्छन् ? अहिलेसम्म कति र कस्ता प्रवृत्तिका लगानीकर्ता आएका छन् ?
हामीले काम गर्न थालेको नौ महिनाको अवधिमा ३० जनाभन्दा बढी व्यक्ति र संस्थालाई यो सेवा दिइसकेका छौं । आउने र बुझ्ने क्रम जारी छ । यसबीचको अनुभव हेर्दा लगानी व्यवस्थापनका विषयमा धेरै बुझाउन जरुरी रहेछ भन्ने लागेको छ । अहिले हामी लगानीकर्तामा रहेको अन्योल हटाउँदै तपाईंकै बैंक खाता, तपाईंकै डिम्यट खाता र तपाईंकै ब्रोकर खातामा रहेर लगानी व्यवस्थापन गरिदिन्छौं भन्ने बुझाउँदै काम गरिरहेका छौं ।
लगानीको न्यूनतम सीमा कति छ ?
लगानी व्यवस्थापनको निर्देशिकाले न्यूनतम ३ लाखसम्मको लगानी व्यवस्थापनका लागि स्वीकृति दिएको छ । र, त्यो नगद या स्टक पनि हुनसक्छ । यसबाहेक हामीले मासिक १० हजारसम्म किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता भएका ग्राहकलाई लक्षित गरी बैंकबाट ऋण लिन सहयोग गरिदिएर पनि लगानी व्यवस्थापनको सुविधा प्रदान गरेका छौं ।
लगानीबाट उच्च प्रतिफलको सुनिश्चितता कसरी गर्नुहुन्छ ?
उच्च प्रतिफल सुनिश्चित गर्न हामीले इन्भेस्टमेन्ट गाइडलाइन नै बनाएका छौं । हामीसँग एउटा छुट्टै रिसर्च डिपार्टमेन्छ छ । यो डिपार्टमेन्टले त्यही गाइडलाइनभित्र रहेर कुन कम्पनीको सेयर, कति अवधिका लागि किन्न सकिन्छ भन्ने कुराको सुझाव दिन्छ । त्यही सुभावका आधारमा हामी सेयर किनबेच गरिदिन्छौं । न्यून मूल्यमा किनिदिन्छौं र उच्च नाफाको अवस्थामा पुगेपछि हामी बेचिदिन्छौं । नेपालको मार्केट अलि बढी भोलाटायल प्रवृत्तिको छ । आज ह्वात्त बढ्छ, भोलि त्यही हिसाबले घट्छ । यो मार्केटबाट छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल लिन मार्केटको ट्रेन्डसँगै तलमाथि गर्न सक्नुपर्छ । त्यसकारण लगानीकर्ताबाट हामी आफैं सेयर किनबेचको अधिकार लिन्छौं र उच्च प्रतिफल सुनिश्चित गर्छौं ।
लगानीको थोरै मोडालिटी बताइदिनुस् न !
हामी लगानीकर्तासँग कम्तीमा एक वर्षका लागि सहमति गर्छौं । मानौं कि तीन वर्षका लागि लगानी व्यवस्थापन गरिदिने सहमति भयो भने उहाँहरुको १० प्रतिशत पैसा आईपीओ र हकप्रदका लागि सुरक्षित गर्छौं र बाँकी पैसामध्ये ६० प्रतिशतलाई दीर्घकालीन र ४० प्रतिशतलाई अल्पकालीन प्रवृत्तिको स्टकमा लगानी गरिदिन्छौं ।
सेवा शुल्क महँगो होला नि !
बैंकले ऋण लिँदा लिने प्रोसेसिङ फी जस्तै हाम्रो पनि प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि वार्षिक म्यानेजमेन्ट फी हुन्छ । लगानीको भोल्युम र समयावधिको आधारमा यो ०.५ देखि १.२५ प्रतिशतसम्म छ । र, अर्को पफर्मेन्स फी हुन्छ । यसलाई आम्दानीबापत लिने शुल्क पनि भनिन्छ । हामीले तपाईंको पैसाबाट ८ प्रतिशतमात्र कमाउन सक्यौं भने कुनै शुल्क लिँदैनौं किनकि यो आम्दानी त तपाईंले बैंकमा पैसा राखेर कुनै रिस्कबिना कमाउन घरै बसेर सक्नुहुन्थ्यो । जुन हाम्रो क्षमताले कमाएको हुँदै होइन, त्यसमा पफर्मेन्स फी भन्ने प्रश्नै आउँदैन । तर, ८ प्रतिशतभन्दा माथिको कमाइमा १५ देखि २५ प्रतिशत शुल्क हामी लिन्छौं, ७५ देखि ८५ प्रतिशत तपाईंको हुन्छ । यो भनेको कुल आम्दानीको बढीमा २.५ प्रतिशतजति हुन्छ ।
सेयर बजारको अहिलेको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
सेयर बजार अत्यन्तै तरल हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालको सेयर बजारमा सोचेर प्रवेश गर्नेहरु एकदमै कम छन् । आज एउटा सोचेर किनेको हुन्छ र भोलि कसैले केही हल्ला चलाइदियो भने तत्काल बेच्न दौडिहालिन्छ । आफ्नो डिसिजनमा अडिग रहेको पाइँदैन । यो एकदमै गलत छ । खास कुरो के हो भने बजारले गल्ती गर्छ, त्यसबेला तपाईंले उठाउनुहोस् । मार्केटले फेरि गल्ती गर्छ र धेरै पैसा हाल्छ, त्यसबेला बेच्नुहोस् । तर, कहिल्यै अर्कोले के भन्यो भनेर नदौडिनुस् । नेपालको बजार सामान्य हल्लाको भरमा पनि बढी उतारचढाव आउने प्रवृत्तिको छ, जुन अहिले पनि भइरहेको छ । हाम्रो अध्ययनअनुसार अहिले बजार ‘अन्डर भ्यालुड’ छ । यो सेयर किन्ने बेला हो । वारेन बफेट इन्डिकेटरअनुसार विकासोन्मुख र विकसित दुवै प्रकारको अर्थतन्त्रमा जीडीपीको १३५ प्रतिशतसम्म मार्केट बढ्दा पनि त्यसलाई ‘ओभर भ्यालुड’ मानिँदैन । तर, आज नेपालको बजार जीडीपीको ४६ प्रतिशतबराबर मात्र छ । यसको अर्थ मार्केट ‘अन्डर भ्यालुड’ छ ।
सेयर बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आयो तर कतिपय कम्पनीको मूल्य ८५–८६ प्रतिशतसम्म ओर्लियो । हाम्रा लागि कुनले बढी अर्थ राख्छ ?
कम्पनीको रिफ्लेक्ट नेप्से हुने भएकाले कम्पनी कति घट्यो र कति बढ्यो भन्ने कुरा मुख्य हो । नेप्से परिसूचकमा होइन कि आफूले लगानी गरेको कम्पनी या लगानी गर्न चाहेको कम्पनीमा लगानीकर्ता सधैं फोकस हुनुपर्छ ।
सेयर बजार लगातार ओरालो लागेपछि लगानीकर्ता निकै आत्तिए । सुधार जरुरी छ कि लगानीकर्ता बढी नै आत्तिएका हुन् ?
पुँजीबजारको स्थापनादेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा धेरै नै समस्या देख्न सकिन्छ । लामो समयसम्म बजारको आधुनिकीकरणका लागि कुनै प्रयास नभएको पनि देखियो । सुधारका प्रयास भएको भए, यो बजारको धेरै प्रगति भइसक्थ्यो । नियामक निकायहरु सुस्त हुँदा बजार विकास प्रभावित भएको निश्चितै हो ।
अहिले बजार प्रवेश गर्न कति सुरक्षित छ ?
बजार प्रवेश गर्ने उपयुक्त समय यही हो । अहिले सेयरको सिजनले पनि सपोर्ट गरेको छ । तर, कम्पनी छानेर बजार प्रवेश गर्नुपर्छ । कतिपय कम्पनी नराम्रा भएर बढी मूल्य घटिरहेको हुन्छ । ‘अन्डर भ्यालुड’ कम्पनी पहिचान गरेर त्यसमा जानुपर्छ ।
पछिल्लाे - वार्ताबाट समाधान खोज्न सरकार र चिकित्सकलाई मानवधिकार आयोगको आग्रह
अघिल्लाे - भक्तपुरमा फेरि बर्डफ्लु, २२ सय कुखुरा नष्ट